TORA Tom Anotonov-225 MRIYA / CHIROTO FSX - Rikoooo
Munyori: Thomas Ruth, vanakomana of Mike Maarse
Native muenzaniso FSX SP1 uye SP2 untested pamwe DirectX10. Rinosanganisira kumboenda 2D emadziro uye yakanaka rakapotsa Cockpit (ona mufananidzo) ndinoiitawo ruzha chaicho An-225 pana Schiphol (Amsterdam). Two shanduro iripo, mumwe chete kwepa pamusoro musana Sovjet Air Force uye imwe shanduro Cargo "International Transport". Rinosanganisira Chinyorwa muna Chirungu (kwete Russian) kuriverenga nokungwarira nokuti zvinofadza chaizvo kudzinga zvikuru muchina yakadaro. Mizhinji vane simba uye kuti Ndokusaka Chinyorwa ndigokuudzawo zvose kiyi.
The Antonov An-225 Mriya ( "Kurota" iri wokuUkraine) ndiye chokufambisa Jumbo ndege, rakanga anogadzirwa USSR (Soviet Socialist Republic muUkraine) uye akagamuchira sezvo zita code for NATO "Cossack" (An-124 aiva mumwe "Condor"). ndege iyi ndiye chaizvo kukura vanokwanisa kutakura makuru uye mitoro inorema pamusoro kure zvikuru.
Ndiwo wakarebesa uye mupfungwa nendege munyika, asi yechipiri maererano noukuru, shure hofori seaplane H-4 Hercules. Maererano Anatoly Boulanenko, iye An-225 haasati rinoshandiswa zvizere kwadzo uye nguva dzose shure naye, An-225 inewo batsira murwi. Zvechokwadi, panguva kuratidzwa pamusoro Bourget, akatendeuka ari necheparutivi pamusoro 45 ° pamwechete Soviet kwepa Buran pamusoro 62 tonnes vasiyana fuselage.
Tom Anotonov-225 MRIYA / HOPE FSX Download
Downloads: 23 564
Downloads: 7 413
Downloads: 63 762